पाेखराका मेयर जिसीलाई १० प्रश्न – Nepal Reports
Home News Nepal पाेखराका मेयर जिसीलाई १० प्रश्न
Previous Video तत्काल मतगणना सुरु गर्न माग गर्दै एमालेकाे दबाब र्‍याली
Next Video ‘पानी थोरै, बिल धेरै’
May 30, 2017 Arjun Giri 0
पाेखराका मेयर जिसीलाई १० प्रश्न
May 30, 2017 Arjun Giri
अपेक्षा गर्नुभएको थियो, यो खालको जित हुन्छ भनेर ?
गाविसको र केन्द्रको गरेर यो मेरो चौथो चुनाव हो । गाविसको चुनाव लड्दा एकल ढंगको हुँदो रैछ । आफू जति दौड्यो त्यति हुने । संविधान सभाको दोस्रोपटकको चुनावको पनि अनुभव थियो । त्यो बेलाका कमी कमजोरीबाट सिकेको थिएँ । पार्टी हुने भइहाल्यो, साथीभाइ र आफन्त पनि सहयोगी भए । कास्की जिल्लामा बसेर ५० सालदेखि पार्टीको कहिले प्रमुख भएर, कहिले इन्चार्ज भएर काम गरें । सामाजिक रुपमा पनि काम गरें । साथीहरुलाई मैले भनेको थिएँ—१० हजारको मतान्तरले जित्छौं । तर साथीहरुले त्यत्रो होइन, ३-४ हजार मतान्तरले जित्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । अहिले तपाईंले भनेको ठिक रहेछ भन्नुभएको छ साथीहरुले ।
यो सहज ढंगले पहुँच पुर्‍याउन सकिने मान्छे हो भनेर मतदाताले विश्वास गर्नुभएको हो । यसले अवसर पाएको छैन र पाउँदा पनि बेइमान गर्दैन भन्ने मतदाताको विश्वास हो । मेयर भइसकेपछि त्यो विश्वासलाई मैले जतन गर्नेछु ।
अझै इमान्दारीपूर्वक भन्दिनोस् न किन यति धेरै मत आयो होला ?
म राजनीतिक रुपमा, सामाजिक रुपमा कास्कीमा घुलमिल भइराखेको र सबैले सकारात्मक भएर सहयोग गरिदिनुभएकाले पनि हो ।
कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन किन असफल भयो ?
उहाँहरुको सम्बन्ध उत्तर र दक्षिणको सम्बन्ध असम्भव थियो । जबरजस्ती सम्बन्ध कायम गर्न खोज्दा मतदाताले सहज रुपमा लिएनन् । स्थानीय चुनाव नभएको २० वर्ष भएकाले अरु पार्टीहरुले आफ्नो धरातल थाहा पाएनन् । हाम्रो पार्टी एमालेले जितेर जानुपर्छ भनेर लागेका थियौं । पार्टी सरकारमा हुँदा हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएर भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध जुन खालको अडान लिनुभयो, राष्ट्र र राष्ट्रियताका बारेमा जुन खालको प्रष्ट धारणा आयो त्यसबाट पनि मतदाताहरु आकर्षित भएको हाम्रो ठम्याइ हो ।
अलिअलि अन्तर्घात पनि भयो होला नि तपाईंहरुलाई ?
अन्तर्घात त म भन्दिनँ । हामीले संस्थागत रुपमा गरेका कमजोरीले केही केही भोट तलमाथि भए होलान् । उम्मेदवार छनोट गर्दा भएका समस्याले केही केही तलमाथि भयो होला तर अन्तर्घातै भयो भन्ने पक्षमा छैन । ती समस्या पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त बनाएपछि ठिक हुन्छन् ।
मेयरको पदबहाली गरेपछि केबाट कामको सुरुआत गर्नुहुन्छ ?
महानगर ठूलो छ । काम पनि धेरै गर्नुछ । तर हामी मसिना कामबाट सुरु गर्छाैं । सेवाग्राहीले बिना झन्झट सेवा पाउनुपर्छ । पहिलो काम त्यो हुन्छ । सुन्दर नगरी पोखरी भनेका छौं, तर सडकमा तारैतारको जालो छन्, फोहोर छन् । नाला छ पानी बग्दैन । सडकमा बग्छ । त्यस्ता साना काम पनि जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी गर्छाैं । पार्टीभित्र र बाहिरका विज्ञ साथीहरुको सिप क्षमतालाई महानगरको विकासका लागि सदुपयोग गर्छाैं ।
अहिलेसम्म नगरपालिका कर्मचारीबाट चल्यो । त्यहाँ एकखाले जालो लागिसकेको छ । त्यो जालो च्यातेर काम गर्न सक्नुहुन्छ ?
सकिन्छ । तर एकैचोटि छु मन्तर कि बाचा नहोला । कर्मचारी साथीहरुको पनि क्षमता बढाएर काम गर्नुपर्छ । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएको हुँदा जनताको सेवक बन्नुपर्छ । हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ । जनताको हितका निम्ति कुनै पनि मोलाहिजा नगरी काम गर्छाैं ।
अहिलेको महानगरका त धेरै काम कर्तव्य र अधिकार छन् नि ?
महानगरको विकासका लागि यहाँ काम गर्न सुरु गर्‍यो भने माथिबाट रोकिदिने, यहाँ काम गर्नुप¥यो भने माथि सोध्नुपर्ने अवस्था अब रहन्न । संविधानसँग नबाझ्ने गरी आफूलाई चाहिने नियम कानुन पनि हामी बनाउन सक्छौं । सय वर्षपछिको पोखरा कस्तो बनाउने भनेर अहिले हामीले काम गर्न सक्छौं । त्यो दुरगामी दृष्टि र योजना बनाएर हामी काम गर्न सक्छौं । पोखरामा स्रोतको अभाव छैन, साधनको अभाव छैन । अभाव छ त केवल दृढइच्छा शक्तिको । दृढइच्छा शक्ति लिएर काम गर्न सक्छौं हामी ।
अब पोखरा यस्तो बन्छ भनेर कहिले भन्न सकिएला ?
विज्ञहरुको सहयोगमा पोखराको गुरुयोजना नै बनाएर काम गर्ने हो । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्छौं । पोखरालाई उपयुक्त हुने नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्छाैं । हामी विज्ञ होइनौं । विज्ञहरुको सहयोग लिने हो । साँच्चै पोखरा बनाउन हामी आँखा चिम्लिएर निर्मम भएर निर्णय गर्छाैं । बरु निर्णय गर्नुभन्दा अघि १७ चोटि सोच्छौं । हामीले अर्काे पुस्तालाई कस्तो पोखरा दिने भन्ने चुनौती छ । यो पोखराको सरकार हो । यसले कस्तो संस्कार बसाल्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।
महानगरको नामबाट लेखनाथ हटाउनुपर्छ भन्ने माग पनि सुनिन्छ । के गर्नुहुन्छ ?
भावनात्मक रुपमा जोडिएको नाम हो लेखनाथ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त नाम हो । पहिचान र भावनासँग जोडिएको लेखनाथ कुनै उत्तेजना र आवेशमा आएर हटाउँदा मान्छेहरुको मनमा चोट पर्छ । सबैको साझा सहमति भए हामी समात्दैनौं । मान्छेहरुको भावनामा ठेस पुर्‍याएर अर्काे विद्रोह जन्माउने हाम्रो उद्देश्य हुँदैन ।
तपाईंसँग मेयरमा प्रतिस्पर्धामा उभिएर निकटतम् प्रतिस्पर्धी बन्नुभएका कांग्रेसका उम्मेदवार रामजी कुँवरलाई के भन्नुहुन्छ ?
मलाई एमालेले टिकट दियो । तर भोट धेरैले दिनुभयो । क्रस मतहरु आए । कुँवरजी र म फरक पार्टीबाट प्रतिस्पर्धा गर्‍यौं । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भयो । वैरभाव राख्नुपर्ने केही छैन । हामी उहाँलाई पनि साथ लिएर पोखराको विकास गर्छाैं ।
previous तत्काल मतगणना सुरु गर्न माग गर्दै एमालेकाे दबाब र्‍याली
next ‘पानी थोरै, बिल धेरै’
जात्रामा ढुंगा हानाहान,११ जना घाइते